हे भ्याली केटाहरू, चाचा याद छ? » Martech Zone
हे भ्याली केटाहरू, चाचा याद छ?
शुक्रबार, डिसेम्बर 4, 2009 शुक्रबार, डिसेम्बर 4, 2009 Douglas Karr
यदि तपाईं मेरो ब्ल्ग लामो समयदेखि पढ्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई त्यो थाहा छ चाचाको बारेमा मेरो राय माथि चढाव भएको छ। ChaCha अब एक ग्राहक हो (मेरो प्रकटीकरण त्यहाँ छ) त्यसैले म गहिरो हेराई गर्दै छु ... र यो राम्रो देखिन्छ।
यसको लागि मेरो शब्द नलिनुहोस्!
सम्पूर्ण टेक समुदाय, टेकक्रन्चमा ईन्टररहरू सहित (मान्छेहरू चाचालाई घृणा गर्न मन पराउँछन्) र Mashable (एको ... इको…) यस तथ्यको लागि अन्धा भएका छन् कि, गत months महिनामा, चाचाले विपक्षीको गधाहरूमा लात हालेर प्रासंगिकतामा फर्कदै छ।
सायद उपत्यकाका केटाहरूले उनीहरूको मायालु आँखा टाढा सर्न आवश्यक छ twitter मिडवेस्ट हेर्नका लागि केवल एक वा दुई मिनेटको लागि।
यहाँ के तपाईंले याद गर्नुभयो ... चाचा एक पाइलामा फुट्यो र चुपचाप प्रवेश गरीयो एलेक्साको सब भन्दा ठूलो websites०० वेबसाइटहरू अमेरिका मा। प्रतियोगिताहरू प्रदर्शन गर्नुहोस् २०% बृद्धि। र Quantcast? यो विकासको लागि कस्तो छ?
त्यसोभए यो कसरी हुन्छ सिलिकन केटाहरू? यसको लागि केही समाचारहरू सुनौं सिलिकर्न भ्याली... चाचा २०० for को लागि कमब्याक बच्चा हो। धेरै व्यक्तिहरू पहिले भन्दा पनि उनीहरूको उत्तरहरू जाँच गरेर भेट्टाउँछन् ChaCha.com वा २ questions२२242242२ लाई प्रश्न टेक्स्ट गर्दै।
कम्पनी लेट को केहि प्रमुख परिवर्तनहरु बाट गएको छ। राम्रो मित्र, ब्लेक मीथेनी, टेक्नोलोजीको पूर्व VP (अपराजे्य उद्यम ब्लगिंग पूर्वाधारको लागि जिम्मेवार) मा कम्पेन्डियम ब्लगवेयर, अब चाचामा टेक्नोलोजी र अपरेसन टोलीको नेतृत्वमा छ।
ब्लेकले भने कि त्यहाँ केही गाह्रो कर्मचारी परिवर्तनहरू र ईन्जिनियरि processes प्रक्रियामा आन्तरिक रूपमा द्रुत र फुर्ति सुधारहरू आएका छन्। अवरोधले काम गरिरहेको छ र धेरै व्यापक अपहरणलाई तोड्यो, र यसको फलस्वरूप, केही राजस्व मोडेलहरू जसले चाचालाई धेरै प्रभावशाली देख्दछन्।
म २०१० को बीचमा चाचामा टोलीसँग काम गर्न अगाडि छु, कम्पनीलाई अन्तरिक्षमा कुनै कम्पनीले नदेखीएको स्तरमा लैजान सहयोग गर्न।
नोटिस लिएको महलो। 😉
टैग: 2012मुद्रीकरणपाइथन बगहरूरेलहरूरुबी बगहरूरेलहरूमा रूबीस्टीफन कोलीमौसम लक्ष्यीकरण
सफल ईमेल सूची भाँडामा र ईमेल न्यूजलेटर विज्ञापनको रहस्य
डिसेम्बर १, २०१62009:२:4 अपराह्न
तिनीहरू मेरो रक स्टार सूचीमा छन्। एक प्रस्तुतीकरणको १० मिनेट पहिले, म एउटा विशेष उदाहरण समावेश गर्ने निर्णय गर्दछु, तर १ 10 1992 २ को ओलम्पिक कांस्य पदक विजेता क्रिसको पहिलो नाम मात्र याद गर्न सक्छु।
चा चा उद्धारको लागि - .. यो केहि समय लाग्यो, तर तिनीहरू यो सही भयो! क्रिस क्याम्पबेल! र म एक प्रतिभा जस्तै देखिन्थ्यो!
तिनीहरू रोलमा छन् किनकि उनीहरूसँग उत्पादन छ कि काम गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरूलाई यो थाँहा छ, सायद अन्ततः सिलिकन उपत्यका पनि हुनेछ